Mogadishu Journal » 2017 » August » 4
Mareykanka oo sheegay in la dilay Cali Jabal
Mjournal : Milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey maanta in weerar duqeyn ah oo dhacay toddobaadkan lagu beegsaday, laguna dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Cali Maxamed Xuseen oo ahaa guddoomiyihii Al-Shabaab ugu magacownaa Muqdisho, islamarkaana ka mid ahaa...
Xarrakada Al-shabaab oo la wareegtay deegaanka Leego
Mjournal :-Sida ay sheegayaan Wararka ka imaanaya Degaanka Leego Ee Gobolka Shabellaha Hoose Dagaalameyaasha Al-shabaab ayaa Maanta la Wareegay Degaankaas. Degaanka Leego ayaa Saakay waxaa iskaga baxay Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM,waxaana Maanta si buuxda ula wareegay...
Mjournal :-Wasiirka Amniga Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow (Ducaale) ayaa Shirkii Golaha Wasiirada ka hor jeediyay Warbixin ku saabsaneyd guud ahaan ammaanka dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maxamed Abuukar Isloow (Ducaale) Wasiirk...
Mjournal :-Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa shalay magacaabay Hanti Dhowrka Guud ee cusub Maxamed Cali Afgooye, kaasoo bedelaya Hanti dhowrkii hore Nuur Faarax ee xilka looga qaaday shilkii uu ku dhintay Wasiirkii hore ee Howlaha Guud Cabaas Siraaji. Hadaba waxaa halkan idin kugu...
Cayaaryaahnka kooxda Barcelona ka sioi dhaqaaqaya ee Neymar Jr ayaa laxaqiijiyey in PSG ku iibsatay aduun lacageed gaaraya £198m .isaga oo ka qaalisan dhamaan Cayaartoyda u dheesha 13 ka mid ah Kooxaha horyaalka Premier League dalka England waa koox walba Cayaartoyda u diiwaan...
Mjournal :- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta guriga martida ee Magaalada Kismaayo kulan gaar ah kula yeeshay Taliyaha Ciidamada Badda Maraykanka ee Africom Gen. David J. Furness oo uu wehelinayo Taliyaha Ciidamada...
Mjournal :-Dadweynaha reer Rwanda ayaa saaka oo Jimco ah u dareeraya codbixinta doorashada madaxtooyada, iyada oo si weyn loo hadal hayo in uu ku guulaysan doono madaxweyne Paul Kagame. Philippe Mpayimana oo ah musharax madax banaan iyo Habineza oo ka tirsan xisbiga Democratic...
QM oo cambaareysay weerarkii lagu dilay askar ka tirsaneyd howlgalka AMISOM
Mjournal :-Golaha Amaanka ee QM ayaa si kulul u cambaareeyeey weerarkii Dagaalamayaasha Al-Shabab ay ku qaadeen ciidamada AMISOM ee dhawaan ka dhacay deegaanka Golweyn ee ku dhow Buula-Mareer Gobolka Shabeelaha Hoose. Taliska AMISOM ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi ay kaga...